Dhageyso: Faah faahin Ciidamadii jabsadaan Baqaarka hubka ee Xerada Jenaraal Gordan iyo sidey wax u dhacen – Walaal24 Newss
April 24, 2018	Off	By walaal24
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in Duhurnimadii shalay oo ay Jabsadeen baqaarka Hubka Xerada Jenaraal Goordan ee magaalada Muqdisho.
Balse waxaa is hortaagay qaar ka mid ah Ciidamadii ay tababartay dowladda Imaaraadka Carabta ee ku sugan Xeradaasi, kadibna waxaa u gurmaday Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga oo gabi ahaan la wareegay Xeradaasi.
Ugu yaraan illaa 10 Askari oo ka tirsanaa Ciidamada ay tababartay dowladda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen Iska hor imaadkaasi, sida uu Warbaahinta u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Ciidamdii soo boobka ka geystay Xerda Jenaraal Gordan oo wata lix gadiidka Tignikada Cabdibilaha kana tirsanayeen Ciidamada Meleteri lagu eedeyay inuu horkacayay Taliyihii dhawantaan loo magacaabay Xerada Jenaraal Gordan.
Hordhaca kulanka Liverpool vs Roma semi-finalka lugta koowaad ee Champions League
Dowladda Soomaliya oo ka hadashay lacagtii lagu qabtay Garoonka Aadan Cade ee ka timid Imaraadka
Wasiir Beyle oo ka war bixiyay shirka dib u habaynta dhaqaalaha iyo hufnaanta maaliyadda
Khasaaro ka dhashay Roob dabeylo watay oo ka da’ay degmada Sallaxley ee gobolka Maroodijeex.
Gudomiyaha Gobalka Banadir “Soomaaliya waxaa ay soo buxisay sharudihii looga bahnaa Shirka Brussels”
Daawo: Wasaarada Awqaafta iyo Diinta oo fududeysay Fiisaha gudashada Xafka Sanadkan